Palestina : Ny tantaran’ilay “martiora” avy any Gaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Febroary 2009 19:25 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Italiano, Français, English
Mangirifiry ny fahafatesan'ny olona akaiky anao, nefa atao ahoana no hahazaka ny fahoriana raha ilay olona no naniry ny ho faty ? Ilay mpitoraka bilaogy avy any Gaza, Samaher Al Khazandar no nanoratra mikasika ny zanak'anabaviny antsoina hoe Mu’min Musa Al Khazandar, izay nanaraka ny miaramilan'ny Hamas, ary nanapa-kevitra fa ho faty martiora mandritra ny ady ho an'i Palestina.
“Ry neny, rehefa nieritreritra aho dia handeha hanao martiora ho an'Andriamanitra” “Nanaiky handray ahy mantsy ny Izz Al Din Al Qassam Brigades…Tsy zava-dehibe ny hoe iza no mibaiko ahy hanao jihad , fa ny zava-dehibe dia ny faniriana…Ny faniriako dia hiady ho an'Andriamanitra, ary hanafaka ny tanindrazako miaraka amin'ny namako ary nahita namana tsara aho ao amin'ny miaramila.” “Ry neny, maniry andro lava ivelomana ny olona, kanefa tsy misy fiainana raha tsy ny fiainana any an-koatra; hiezaka aho hanatanteraka ny lalana fohy indrindra hahazoako valisoa in-droa mihoatra izay tokony ho azoko.” “Ry neny, tsy isika no manantona ny fahafatesana, fa maty isika ary manao ny tsara mba hahafatesana, dia omen'Andriamanitra antsika izay niriny ho antsika. Raha resaka famonoan-tena izy ity, dia tsy ho tafaverina na dia iray aza aminay” “Ry neny, ny dikan'ny hoe jihad dia fandresena na martiora…Mivavaha ho ahy mba hahatongavako ho ny anankiray amin'ireny; maniry ny ho faharoa aho.” “Ry neny, Andriamanitra no nifidy ny martiora…fa tsy hoe ny olona rehetra dia fidian'Andriamanitra ho martiora. Mivavaha ho ahy mba hifidianan'Andriamanitra ahy, ary mba ho faly amin'izany ianao…Faly miaraka amiko ve ianao?” “Rehefa lasa martiora aho, ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hiverenako amin'iny lalana iny, lanjain'ny olona eny an-tsorony.” manako ao an-tsofin-dreniny miandry eo an-davarangana ireo tenin'i Mu'min ireo, mitazana ny lalana simban'ny daroka tafondro isaky ny misy fanafihana.Mirehitra ny alina mangatsiakan'ny ririnina ao Gaza, tahaka ny endriny, ary niventso izy,”Andriamanitra ô, 18 andro izay…18 andro teo ambany famindram-ponao,eto amin'ny taninao ary eto ambany lanitrao…18 andro tao anatin'ny hatsiaka, izay nandarohan'ny fiaramanidina tafondro manodidina azy…Andriamanitra ô, araka ny fahasoavanao dia handevina azy aho, avelao aho mba hahita azy ary handevina azy avy eo…Andriamanitra ô, any aminy ny masonao, miaro azy… efa napetrako eo Aminao izy…Hampangatsiaka ny afo ato anatiko ny fiverenany alohan'ny veloma mandrakizayl…Andriamanitra ô…Naniry ny ho martiora izy ary natoky Anao, Andriamanitra ô, minoa azy, ary ataovy ho isan'ny martioranao izy”
Niverina ny jiro nanazava ny arabe rehefa tapaka nandritra ny 2 andro maninjitra. Nijery fahitalavitra avy hatrany izymba hihaino ny vaovao ary nanatena fa hahita fanambarana hampitsahatra ny fahoriany izay tsapany fa ela loatra. Ny Piraiminisitry ny fahavalo no hitany tao, nitsangana amin'izato havendranany, ary nanambara fa hatsahatra ny ady amin'ny andaniny sy ny ankilany.Nitsambika izy, ary nihorakoraka. “Misaotra Anao aho Andriamanitra ô, Isaorana anie Andriamanitra!” nandany ny alina manontolo tamin'ny fikarakarana ny trano i Suzanne mba handraisana ny zanany faharoa izay lasa martiora ary lanjain'ny olona eny an-tsorony. Rotika ny fony rehefa mitamberina ao an-tsainy ny zanany mihazakazaka, mitondra fitaovam-piadiana, eny an-dalana izay hiheverana azy ho lasa martiora…Mameno azy ny fahatsiarovana fa izay no fotoana farany nahitany azy tamin'izay fotoana izay…Rehefa maika hamonjy ny fahafatesana izy…
Ny fotoana farany tsy nahitana famonoana vokatry ny nikendrena ny antokon'ny mpiady miaraka aminy dia nody tany an-trano izy, hendratrendratra, izay tsy fanaony. Nivazavaza izy sady niteny hoe, “Misy zavatra tsy mety…na izaho np tsy madio eritreritra na ianareo…Dia mbola notohizany ‘mametraka anareo eo amin'Andriamanitra aho’…Te ho martiora aho…mivavaha mba hahatongavan'izany amiko… mivavaha ho ahy”
Nisafotofoto ny fony tamin'izay andro izay ary niteny tamin'ny feo te hitomany hoe, “Hanatanteraka izay irinao anie Andriamanitra.”tsapany fa fadiranovana loatra ny fanahiny rehefa mamerina ireo rehetra ireo an-tsaina izy, ary mangidy aminy sady tsy ho tantiny ny tsy hanao veloma farany ny zanany.
Rahafa voalamina ny trano handraisana ilay martiora dia nivavaka izy, ary nipetraka nandinika ny telefôna, niandry izay hahatongavany amin'ity maraina vaovao tsy misy masoandro ity. Raha antso an-tariby no nandrasany handrenesany ny vaovao mikasika an'i Mu'min, dia ren'ny sofiny kosa ny tabataba vokatry ny tafondro mirefotra any ivelany any.Tezitra izy, “Tsia…Miverina indray ny ady,miverina indray…Oh, Mu'min, ohhhhhhh…” Taitran'ny feony ny vadiny izay natory ka nitsangana ary nahita azy nitomany kanefa tsy nolazainy azy ny fanantenana ela tao anatiny, rendrika tao, ary novonoina segondra vitsy monja izay.Raha mbola tsy nahazo ny zava-niseho ilay rain'ilay martiora dia naneno ny findainy, nanongilan-tsofina ilay reny ary nijery tsara ilay finday. nanetsika ny lohany, niezaka hahazo izay ambaran'ilay olona miantso izay somary maizina noho ny faharatsian'ny fifandraisana. Niezaka nihaino ilay resaka izy ary nanatena fa handre izay zavatra tsy azon'ny vadiny. Teo vao fantany tamin'ny feo mahery avy any amin'ny arabe ka niolomay nijery izy sady niantsi ny anaran'i Mu'min. Efa tao ambany lavarangana ny naman'ilay martiora niezaka niansto an-dry zareo tamin'ny finday hampandre azy ireo fa hita ny fatin'i Mu'min taorian'ny fisitahan'ny miaramila Israeliana ny faritry Jabal Al Rayyis izay nitobian'i Mu'min talihan'ny nahafatesany. Niaraka tamin'ireo namany sasantsasany tao amin'ny toeram-pitsaboan'i Al Shifa izy.
tahaka ny ora ny minitra, tonga ny fianakaviana sy ny havana aman-tsakaiza nameno ilay tranokely niaraka tamin'i Suzanne sy ireo olona nikarakara an'i Mu'min. Nitsangana teo an-davarangana izy niandry ny fahatonagavany, eny amin'ny arabe izay nolazainy fa hiverenany, izay toa zary lasa lava kokoa. Nanodidina azy teo ireo rahavaviny, ary nahatsapa hafanana izy taorian'ny antso an-tariby. Nitodika tany amin'izy ireo ny masony ary hitany fa manjombona ny endriny. Hoy ny anankiray, “Ny tian'i Majid hambara…hoe…tsy nisy nahalala ny endrik'i Mu'min ireo miaramilan'i Qassam na dia iray aza…”
Nijery azy ireo feno fanahiana izy ary namaly, “Potika ve ny vatany? Nanazava ny rahavaviny, “Tsia, tsia…Nilaza ry zareo fa tsy potika fa toy ny taloha ihany… afa-tsy…hoe nipoahan'ny tafondro ny lohany …Ry rahavavy, tsy misy fantatra ny endriny…Tsy jisy potika afa-tsy ny lohany ihany…ny tiako hambara…ny zavatra tsara tao aminy no tadidio…Azoko antoka fa tsy naniry anao hahita azy tahaka izany izy”
Nijery ny maso voton-dranomason'izy ireo izy, nilaza hoe, “Efa napetrako tamin'Andrimaanitra izy…Tsy avelan'Andriamanitra ho zava-poana izao…”
Nijery ny arabe indray izy ary hitany fa efa nanomboka nisy zavatra teny… Nojereny ny endrik'ireto namany sy havany ary miaramila niaraka taminy nilanja azy teny an-tsorony, norakofana ny saina fotsin'ny Qassan Brigades, toy izay efa niriny. Taoriany ny andian'olona maro; rangahy iray no miantsoantso, ary mamerina ny rehetra, “Tsy misy andriamanitra afa-tsy Andriamanitra ary avy amin'Andriamanitra ny martiora” Rehefa tonga teo akaikin'ny varavarana ny olona dia nampidirina tao an-trano ny vatam-paty, dia namakivaky azy ireo i Suzanne, nisava ny lalana mandra-pahatongany teo amin'ilay vatam-paty napetraka teo afovoan-trano. Notsapainy avy ao amin'ny lambam-paty, nitsapa ny tanany izy mandra-pahitany azy tao ambany saina fotsy. Henony ny rantsany, nitsiky izy na dia nitomany aza, nisento tahaka ny manimbolo ny fofona ao an-trano, ny trano, ny arabe. Ny kiaka hoe “Tsy misy andriamanitra afa-tsy Andriamanitra” no nanako tao amin'izay rehetra nanatrika, raha niantso tamin'ny feo sempotra izy, “Tsy ho zava-poana izao, ry zanako, tsy ho zava-poana… Isaorana anie Andriamanitra… Isaorana anie Andriamanitra…Nangataka izao ianao…Isaorana anie Andrimaanitra…Tsy misy andriamanitra afa-tsy Andriamanitra…Tsy misy andriamanitra afa-tsy Andriamanitra”
Tao anatin'ny olona maro dia najaka ny fahanginana miaraka amin'ny fo malahelo, ary tamim-pitsikiana no nanolorana ny veloma farany. Tamin'ny farany dia nanodina ny lohany izy, afa-po ny masony raha nahita ity vatana mangatsiaka vonona ho amin'ny mandrakizay, hodidin'ireto maso mitomany am-pahanginana, ary nanao topi-maso farany ny vatam-paty haverina holanjaina eny an-tsoroka indray. Nihanatanjaka ny tongotra nihazakazaka, ary nirohotra ny olona handeha handevina. Maika ny handeha i Mu'min, hiverina ho any an-kibon'i Gaza ny nofony, fa ny fanahiny kosa ho any amin'ny mandrakizay, angamba tsy ho ny farany, izay navelany ho an'ny mponina ao Gaza sy ireo mpifanolo-bodirindrina taminy, ny fiangonana sy ny moske, ny fandevenana azy tahaka ny martiora, ary ny ranomason'ireo havana sy mananon-tena ary ny kamboty. Mu'min, lasa ianao, ary namela anay ho irery. Angamba hijery anay ny fanahina ary hiten, “efa nametraka anareo teo amin'Andriamanitra aho”
Rehefa matoky an'Andriamanitra isika, Mu'min, tsy hamela ny fiainantsika ho amin'izao Izy. Izay no lesona azonay tamin'ny fandehananao, ry ilay tokana, izay nitombo ho azy, nialoha ny fitomboanay. Hiverina hijery anay ianao ary hahita fa miha-tanora izahay. Ho avy tsy ho ela ny fandehananao, alohan'ny fahafenoan'ny fisianao aty anatinay, alohan'ny hahatsapanay ny fisianao, ary koa alohan'ny hahaizanay mahatakatra anao. Ry tokako, mbola ao amin'ny miafina ianao. rahoviana no hahazoanao, hanapahanao hevitra, hiasanao, ary hamarananao ny fotoana fohy niainanao tety an-tany… Raha manao tahaka anao daholo ny olona, na dia mandeha amin'ny lalana hafa tsy toy ny anao, dia tsy ho tahaka izao mihitsy ny zava-misy…Mino aho fa tsy veloma farany izao, Mu'min, satria fantatray fa martioran'Andriamanitra ianao. Anisan'ireo nomen'i Mohammed sy ny namany ary ireo rehetra mino azy voninahitra ianao mandra-pahatongan'ny fitsarana farany. Mivavaka izahay ho heniky ny voninahitra ary ho mendrika ny lalana nofidianao…